နှုတ်ခမ်းခြောက်စေတဲ့ အလေ့အထ ငါးခု - Hello Sayarwon
နှုတ်ခမ်းဆိုတာ လှလှပပ စာလုံးလေးတွေနဲ့ အမြဲတမ်း တင်စားဖွဲ့ဆိုခံရတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်း တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို ထိန်းသိမ်းဂရုစိုက်လေ့မရှိကြပါဖူး။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေဟာ လိင်ဆွဲဆောင်မှုရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတ တခုအဖြစ် ယူဆကြလေ့ရှိပြီး ဒီနှုတ်ခမ်းက ခြောက်ခြောက်ကြီး ဖြစ်နေရင်တော့ သိပ်အဆင်မပြေလှပါဘူး။ နှုတ်ခမ်းခြောက်စေတဲ့ အကြောင်းခြင်းရာတွေ အများကြီးရှိပြီး အဲ့ဒီအထဲက အချက်ငါးချက်အကြောင်းကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ဆွေးနွေးပါမယ်။
ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံး ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကြောင့်လည်း နှုတ်ခမ်းခြောက်လာနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ သင့်အနေနဲ့ တနေ့တာအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေပမာဏအတိုင်း လုံလုံလောက်လောက် မသောက်ဖူးဆိုရင် သင့်နှုတ်ခမ်းတွေ ခြောက်သွေ့ပြီး အဖတ်တွေကွာလာမှာ ဖြစ်ကာ ဆွဲဆောင်မှုလည်း ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
နှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့ သပ်ခြင်း
လူအများစုဟာ ဒီပြစ်မှုကြီးကို အနည်းဆုံး တစ်သက်မှာ တစ်ခါတော့ မသိလိုက်မသိဖာသာ ကျူးလွန်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ တချို့က အကျင့်ပါနေလို့ လုပ်တယ်။ တချို့က ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် နှုတ်ခမ်းကို တံတွေးနဲ့ စိုစွတ်နေမယ် ထင်လို့လုပ်ကြတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ လုပ်လုပ် ဒီလိုမျိုး နှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့သပ်တာ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရေပြားဟာ အဆီလွှာကို သဘာဝအတိုင်း ထုတ်လုပ်နိုင်ပေမယ့် နှုတ်ခမ်းကတော့ မထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် တံတွေးအငွေ့ပျံသွားပြီဆိုတာနဲ့ ပြန်ပြီးခြောက်ကပ်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီမှာ ကမ်းခြေသွားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ဒီအတိုင်း အပြင်ထွက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သင့်အနေနဲ့ နှုတ်ခမ်းအပါအဝင် ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးကို နေလောင်ခံခရင်မ်လိမ်းဖို့ အရမ်းပဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ပုံမှန် မျက်နှာလိမ်းတဲ့ နေလောင်ခံခရင်မ်ကို လိမ်းရင်လည်း ဖြစ်ပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ SPF ပါတဲ့(နေလောင်ဒဏ်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့) နှုတ်ခမ်းလိမ်းခရင်မ်ကို ဝယ်လိမ်းသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့မှာ နှုတ်ခမ်းအစိုဓါတ် ထိန်းပေးထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ပါရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှုတ်ခမ်းအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ SPF ပါတဲ့ နှုတ်ခမ်းလိမ်းခရင်မ်တွေ ရှိနေမှတော့ ဘာလို့ မျက်နှာလိမ်းခရင်မ်တွေကို နှုတ်ခမ်းအတွက် လိမ်းနေဦးမှာလဲ။ မဟုတ်ဖူးလား။
နွေရာသီပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဖူး။ နှုတ်ခမ်းလိမ်းခရင်မ်ကို ဆောင်းရာသီမှာလည်း လိမ်းသင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆောင်းရာသီမှာ ရာသီဥတုအေးတဲ့အပြင် တိုက်တဲ့လေကလည်း ခြောက်သွေ့ပြီး အစိုဓါတ်မပါပါဖူး။ နေပူရှိန်တော့ အရမ်းမပြင်းဖူးဆိုသော်ငြား ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကတော့ ပိုပြင်းထန်ပြီး ပိုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ မှတ်တမ်းတွေအရ သိရှိရပါတယ်။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ အချို့သော ဆေးတွေ (ဥပမာ accutain၊ propranolol ဒါမှမဟုတ် prochlorpezazine) တို့ဟာ နှုတ်ခမ်းကို ခြောက်သွေ့အက်ကွဲစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆေးမသောက်ခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ မေးမြန်းဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် သင့်နှုတ်ခမ်းအရမ်းခြောက်လာတာ၊ပါးလာတာ ဒါမှမဟုတ် သွေးထွက်တာတို့ဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
နှုတ်ခမ်းလေး လှလှပပဖြစ်ရေးမှာ ဗီတာမင်ဓါတ်တွေကလည်း အရေးပါတဲ့ နေရာက ပါဝင်ပါတယ်။ တချို့သော ဗီတာမင်ဓါတ်တွေ ချို့တဲ့တာ ဒါမှမဟုတ် အလွန်အကျွံသုံးစွဲတာတွေကြောင့် နှုတ်ခမ်းမှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် B-3 ဟာ သင့်နှုတ်ခမ်းရဲ့ အစိုဓါတ်ကို ထိန်းပေးပြီး ဗီတာမင် B-12 က အနာကျက်တာကို မြန်စေကာ ဇင့်ဓါတ်ကတော့ ဆဲလ်ကြီးထွားမှုကို အားပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗီတာမင် အေကလည်း နှုတ်ခမ်းရဲ့ သဘာဝအတိုင်း အဆီထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီတာမင်ဓါတ်လုံလုံလောက်လောက်စားပေးဖို့ တကယ်ပဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗီတာမင်ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေ၊အစာတွေ မစားခင်မှာ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ အရင်မေးမြန်းတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗီတာမင်အေဓါတ် အရမ်းများရင် နှုတ်ခမ်းအရေပြားတွေ စတင်ပြီး ကွာကျလာတတ်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့အက်ကွဲတာကို သက်သာပျောက်ကင်း ကာကွယ်တားဆီးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ တပုံတပင် ရှိနေပါတယ်။ ပထမဆုံးနည်းလမ်းက ရှေးအကျဆုံး၊အလွယ်ကူဆုံး ဖြစ်တဲ့ ရေများများသောက်တဲ့ နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့ကို
အနည်းဆုံး ရေနှစ်လီတာလောက် သောက်ပါ။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ SPF ပါဝင်တဲ့ နှုတ်ခမ်းလိမ်းခရင်မ်ကို ကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထားပြီး လိုအပ်တိုင်း လိမ်းပေးပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားပါ။ နောက်ဆုံးအချက်က အရေးကြီးဆုံးလို့တောင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို လျှာနဲ့သပ်တဲ့၊ကိုက်တဲ့၊ဝါးတဲ့ အလေ့အထအကျင့်ကို အပြီးတိုင် ဖျောက်ပစ်လိုက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
10 Most Common Causes Of Chapped Lips. https://www.symptomfind.com/health/causes-of- chapped-lips/acessed March 18, 2017
How to Heal Chapped Lips Quickly. http://www.livestrong.com/article/69330-heal- chapped-lips- quickly/acessed March 18, 2017
Chapped Lips (Cheilitis): Causes, Symptoms, Treatments and Prevention.
https://www.consumerhealthdigest.com/lip-care- center/chapped-lips.html acessed March 18, 2017